Union Minister U Kyaw Tin accepts credentials from Resident Representative of UNDP – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin received Mr. Peter Batchelor, the newly-appointed Resident Representative of UNDP for Myanmar at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw on 28 March 2019. During the occasion, Mr. Peter Batchelor presented his credentials to the Union Minister.
After the presentation of credentials, they exchanged views on the progress of the cooperation between Myanmar and the UNDP in wide-ranging areas including peace and good governance, environmental management, rule of law, anti-corruption, and poverty reduction under the UNDP Country Programme to Myanmar (2018-2022) as well as the implementation of the ongoing projects in Rakhine State.
Ref; The Global New Light of Myanamar
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
(၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme – UNDP) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ Mr. Peter Batchelor အား ၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၀ဝ၀ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် Mr. Peter Batchelor က ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ်ပြီးနောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရာတွင် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အရ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအပါအဝင် နယ်ပယ်များတွင် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။